Livestorm: Qorsheyso, fuliso, oo wax ka beddel Istaraatiijiyaddaada Webinar ee Soo-gala | Martech Zone
Livestorm: Qorsheyso, fuliso, oo aad ku-wanaajiso Istaraatiijiyaddaada Webinar ee Soo-galista ah
Khamiista, Diseembar 3, 2020 Khamiista, Diseembar 3, 2020 Douglas Karr
Haddii ay jirto hal warshad oo ku qarxay kororka xaddidaadaha safarka iyo qufulka, waa warshadaha dhacdooyinka internetka. Hadday tahay shir onlayn ah, bandhig iib ah, webinar, tababar macmiil, koorso khadka tooska ah ah, ama shirar gudaha ah oo keliya companies shirkadaha badankood waxay ku khasbanaadeen inay maalgelin xoog leh ku sameeyaan xallinta shirarka fiidiyaha.
Istaraatijiyadaha soo-galista waxaa wada websaydhyada maalmahan… laakiin ma aha sida ugu fudud ee la moodo. Baahida loo qabo in la dhexgalo ama la isku duwo kanaalka kale ee suuqgeynta, soo dejinta barnaamijyada iyo iswaafajinta, bogagga degitaanka, foomka iskudhafka software, barnaamijka fiidiyowga, iyo falanqaynta ayaa had iyo jeer loo baahan yahay si loo dhiso istiraatiijiyad aan toos ahayn oo khadka tooska ah laga bilaabo bilow ilaa dhammaad.
Livestorm: Dalbashada, Tooska ah, iyo Webinarska iswada
Livestorm waxay dhistay barnaamij fudud oo fudud, ka caqli badan, ka fiican, webinar oo diiradda saaraya khibrada isticmaale, aragtida suuq geynta, iyo otomaatiga.
Waad ordi kartaa nooc kasta oo webinar ah adoo adeegsanaya barnaamijka:
Webinars Live - Livestorm waa xalka HD-ka ee ku-saleysan biraawsarka, oo aan u baahnayn wax soo dejineed oo software ah haba yaraatee. Iyo, waxay awood u siineysaa wadaagista shaashadda, Youtube ama wixii kale oo toos ah ee loogu talagalay in lagu dhex daro websaydhkaaga.
Webinars soo noqnoqda - Martiqaad hal webinar leh fadhiyo badan isla markaana ku hayso isla bogga soo degitaanka. Soo-booqdayaashu waxay dooran karaan taariikhda ay doortaan boggaaga diiwaangelinta.
Webinars-ka horay loo duubay - Haddii aad rabto khibrad webinar oo bilaa cillad ah, hal hab oo tan lagu sameeyo ayaa ah inaad horay u sii duubto oo aad u soo geliso websaydhkaaga si aad ula ciyaarto dhagaystayaasha. Kaliya garaac ciyaarta!
Dalbashada Webinars - Soo rar boggaaga oo u oggolow rajooyinka inay daawadaan fiidiyowgaaga markay doonayaan.
Inta ugu fiican oo dhan, ma jiro xaddidan kaydinta dib u soo celinta shabakadahaaga!
Noocyada Livestorm Ku dar
Diiwaangelinta Webinar - foomamka loo habeeyay ama bogagga diiwaangelinta ayaa lagu dhisay isla marka lagu daro. Ku dar goobo dheeraad ah si aad u-sii-qorto rajadaada. Xitaa waad ku dhejin kartaa foomamka boggaaga.
Email Marketing - Soo rar xiriiriyahaaga, soo dir casumaad emayl shakhsi ahaaneed, isla markaana si toos ah ugu soo dir xusuusinta diiwaan-geliyaashaada inay ka soo qayb galaan,
Isdhexgalka Dhageystayaasha - sheekaysiga, doorashooyinka, su'aalaha iyo jawaabaha, soona bandhigayaal soo-jeediyayaashu dhammaantood waxay ka qaybqaadan karaan waqtiga-dhabta ah ee websaydhkaaga.
Warbixinta - Qabso isha diiwaangelinta iyo xawilaadaha, u fiirso ka-qaybgalayaasha ka soo qaybgal, raad-raac ka-qaybgalka, iyo u eeg astaamaha diiwaangelinta ee websaydhkaaga.
Hirgelinta Tag - Ku dar Google Analytics, Intercom, Drift, ama qoraallo kale oo qoraal ah bogaggaaga diiwaangelinta.
Integration - Ka saar dhammaan macluumaadkaaga diiwaangashan, jawaabaha doorashada, xogta falanqaynta, ama ku dar Zapier, Slack, Suuqgeynta Emailka, Suuqgeynta Suuqgeynta, Bogagga Degitaanka, Bixinta Lacagaha, Xayeysiinta, Wadahadalka Tooska ah, ama ku riix CRM adoo adeegsanaya isdhexgalka wax soo saarka ee Salesforce , Microsoft Dynamics, Pipedrive, Salesmate, Zenkit, ama SharpSpring.
Webhooks iyo API - Ku dar Livestorm boggaaga ama barnaamijkaaga gaarka ah API-ga adag iyo webhooks.
Isku day Livestorm Bilaash Hada
Shaacinta: Anigu waxaan ku xiran ahay Duufaan.
Tags: marketing inboundDuufaanDynamics Microsoftonbin dalbashadaPipedriveshabakadaha horay loo duubaywebsaydhka soo noqnoqdaiibinIibiyahafiiqanwebinarxusuusinta emailka webinarsuuqgeynta webinarmadal webinardiiwaangelinta webinarWebinarszenkit